कर तिर्ने मात्र होईन विकास खोज्ने अधिकार पनि हामीले पाएका छौं - AahaSanchar
Home आहा टक कर तिर्ने मात्र होईन विकास खोज्ने अधिकार पनि हामीले पाएका छौं
कर तिर्ने मात्र होईन विकास खोज्ने अधिकार पनि हामीले पाएका छौं
रुकुम पूर्व भूमे गाउँपालिका केन्द्र टुङ्गो भै कार्यालय भवन पनि निर्माण भैसकेको छ । गाउँपालिकाको केन्द्र गत पौष ८ गते गाउँसभा बसेको बैठकले वडा नम्बर २ को खाबाङ बगरमा केन्द्र बनाउने निर्णय पारित गरेको थियो । भवन निर्माण भैसके पछि साविकको कार्यालय वडा नम्बर ३ सीमाबाट असोज ३० गतेको दिनमा खाबाङ बगरमा सारिएको हो । गाउँपालिकाको नगद र स्थानीयको श्रमदानमा २६ कोठाका २ पक्की भवन सहित सभाकक्ष निर्माण गरिएको छ । स्थानीय खाबाङबासीले गाउँपालिकालाई निःशुल्क जग्गा समेत दिइसकेका छन् । यी विषयमा सहकर्मी जयमान बुढा मगरले भूमे २ खाबाङका स्थानीय बुद्धिजिवी तथा समाज सेबी नारायण पुनसंग गरिएको कुराकानी ।
आज भोली के गर्दै हुनुहुन्छ ?
म पहिले विगत आठ नौ वर्ष भो समाज सेवामा काम गर्न सुरु गरेको म अहिले पनि समाजको काममा नै लागि रहेको छु । २०६८ सालमा दोबान युबा क्लब मेरै अध्यक्षतामा नै दर्ता गर्यौं र चार वर्ष सम्म त्यस क्लबको नेतृत्व गरे र विभिन्न व्यापार व्यवसाय, क्लबले काम गरे बाफतको सहयोग दाताले आफु खुसी दिएको रकम, व्यक्तिगत नविकरण, देउसी भैलो आदि सहयोगीहरुले क्लबलाई सहयोग गरेको रकम जम्मा ग¥यौँ । उक्त रकमले विभिन्न सामाजिक काम गरेका छौँ । विद्यालयमा निजि शिक्षकका लागि रकम सहयोग । सामाजिक काम, सुशासन, एउटा नमूना गाउँ ठाउँ निर्माण गर्ने काममा नै लागि राखेको छु ।
हाल यस क्षेत्रमा काम गर्दै गर्दा कस्तो खालको अनुभुती लिनु भएको छ ?
समाज सेवा अथवा काम गर्न सानै देखिको सोच थियो । म समाजमा इमान्दार पुर्वक काम गर्दै गएको कारणले समाजलेनि काम गर्ने अवसर दिएको छ । सबैलाइ समाजको काम बारे थाहा नभएको अवस्था थियो । काममा सल्लाह, सुझाव तथा बैठकबाट निर्णय गरि काम गर्ने खालको समाजमा चलन नै थिएन । अहिले सबैको सहभागीता, सहमतमा बैठक मार्फत काम गरिराखेका छौँ । र समाजमा काम गर्दा त सारै चुनौटी पूर्ण कार्य नै छ ।
खाबाङबासीले गाउँपालिकाको लागि निःशुल्क जग्गा दिनु भो, किन ?
वडा नम्बर ६ महत र वडा नम्बर ३ सीमाले गाउँपालिकाको केन्द्रको लागि पालिकामा प्रस्ताव पेश गरेका थिए । हामी पनि गाउँ बैठक बस्यौँ र निर्णयले पालिकाको लागि जग्गा दिने निर्णय ग¥यो । त्यस पछि खाबाङबासीले पनि केन्द्रको लागि प्रस्ताव पेश ग¥यौँ । र गाउँसभाको बैठकले वडा नम्बर २ खाबाङ बगरमा पालिकाको केन्द्र राख्ने निर्णय पारित ग¥यो । केन्द्रको लागि प्रस्तावित तिनले नै निःशुल्क जग्गा पालिकाको लागि दिन्छौँ भनि प्रस्ताव पेश गरेका थियौँ । हामीले किन पालिकाको लागि निःशुल्क जग्गा दिन तयार भयाँै भन्दा भूमे गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह गर्ने सबै सेवा ग्राहीलाई पाइक पर्ने केन्द्र बिन्दु रहेकोले सबै पालिकाबासीको निम्ति नै पालिकाको नाममा निःशुल्क जग्गा दिन तयार भएका हौँ ।
कति रोपनी दिनु भो जग्गा ?
पालिकालाई आवश्यक पर्ने जग्गा २६ रोपनी जग्गा दिने भएका छौँ । त्यस मध्यमा कुनै जग्गा धनीहरु बिदेशमा हुनुहुन्छ उहाँहरु आउने बेत्तिकै सबै पालिकाको नाममा पास दिन्छौँ । हामी खुसी छौँ स्थानीय सरकारको सूचना विज्ञापन, आफुलाई थाहा नभएको कुरा सोधपुच, विकासका काम, पालिकाको कार्याक्रम आदि सेवा आफ्नै घर दैलोमा पाउदा हामी खाबाङबासी खुसी छौँ ।
के पाउनुको लागि जग्गा दिनु भो पालिकालाई ?
पाउन त के होला र आफ्नो आटो पिठो खाएर गाउँमौ सेवा पाउनु नै हो । फरक छ केन्द्र बसेको ठाउँमा त सबै विकासे सरोकारवालाको पनि ध्यान आफै केन्द्रीयत होला । आफ्नै गाउँमौ व्यापार व्यवसाय गर्ने सजिलो आफ्नै खेतबारीमा उत्पादित वस्तु बिना दवानीमा नै बिक्री गर्न सकियो । मान्छेको चहलपहलले गाउँपालिकाको ठाउँमा बजारीकरण होला । हरेक कृषि उत्पादनले बजार पाउने भो । मुख्य त सेवा सुविधामा सहज पाउनु नै हो ।
स्थानीय तह हँुदा र नहुँदामा के फरक पाइराख्नु भएको छ ?
स्थानीय तह हुदा र पहिले नहुँदाको धेरै फरक पाइराको छु । अहिले स्थानीय तहमा विकासका काम, न्यायको लागि स्थानीय तहमै न्यायिक समिति छ, हामीले नै चुनेका जनप्रतिनिधिहरुसंग नै काम गर्न पाएका छौँ, विकासका काम पनि छिटो र छरिटो भैराखेका छन् । स्थानीय सरकारले प्रत्येक वर्षमा विकासका योजना प्रत्येक ठाउँमा दिइराखेका छन् । अनि सेवा सुविधा पनि कम समय र कम खर्चमौ पाइराखेका छौँ । पहिला स्थानीय सरकार नहुँदा सानो काममा नि जिल्ला नै जानु पर्ने थियो । समय तथा पैसाको खर्च धेरै हुन्थ्यो र त्यस्ता दःुख खेप्नु परेको थियो । अझै बन्नु पर्दा विकासका योजनाहरु गाउँमा नपर्ने, अहिले त आफ्नै वडामा योजना तर्जुमा गर्ने अधिकार समेत पाएका छौँ । जनप्रतिनिधिहरु पनि हाम्रै गाउँ ठाउँकै पाएका छौँ उहाँहरुले पनि समस्याको आधारमा बजेत वियोजन गरिराख्नु भएको छ ।
अहिले सम्ममा स्थानीय तहको काम कसरी समिक्षा गर्नु हुन्छ ?
अहिले सम्ममा स्थानीय सरकारको काम भूमेका नागरिकका लागि राम्रो भैराखेको देख्छु । बजेट तथा योजना समस्याको आधारमा वियोजन गरिराख्नु भएको नै छ । त्यस्तै निःशुल्क युबा उद्यमशिलता तालिम, कृषि तालिम, आदि तालिम पालिकाले दिदा र हामीले पाउदा अत्यन्तै खुसीको अनुभुती पाइराखेको छु । विकास आ आफ्नो वडाबाट भयो भने त्यस स्थानीय सरकार आफै विकसित हुने हो । तर कुनै वडाका जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो वडाको योजना तथा सूचाना समेत थाहा नपाइ राखेका पनि छन् । काम कर्तव्यमा कसिनु पर्ने हो काममा अलमल परेको अवस्था समेत कुनै वडाका जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ ।
स्थानीय तहले महंगोे कर लगाएको जनगुनासो आएको छ यसमा तपाई के लाग्छ ?
मलाई यस भनाइमा सहमत छैन् । त्यो कर के हो, विकास निर्माण के हो भन्ने नबुजेकाहरुको भनाई हो । कर तिर्नुका साथै विकास खोज्ने अधिकार हामी पाएका छौँ । हामी आफ्नो अधिकारलाई पनि सदुपयोग गर्न सक्नु पर्छ । पहिला एउटा मात्र सरकार थियो र त्यस अनुसारकै विकास कम मात्रा आउने गरेको थियो । तर अहिले तिन ओटा सरकार छन् केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार र पहिला केन्द्रीत विकास थियो भने अहिले विकास योजना विकेन्द्रीत अथवा ठाउँ ठाउँमा विकास तथा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा योजना पाइराखेका छौँ । प्रत्येक बर्ष पाएको विकास, सेवा सुविधा त्यहि हाम्ले तिरेको करबाट नै यी सबै अधिकार गाउँमौ पाएका छौँ । त्यसैले कर बचत हो र हाम्रो नमूना निर्माण घर हो ।
तपाईको विचारमा स्थानीय तहले के गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ?
स्थानीय तहले जनचाहाना तथा भौगोलिक अवस्था हेरि विकास योजना र सेवा सुविधा पनि त्यही अनुसार नै काम गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । स्थानीय स्तरका स्रोत साधनहरुलाई प्रशोधन तथा अनुसन्धान गरि युबाको सिप, क्षमता अनुसार परिचालन गरि काम गरे हुन्थ्यो लाग्छ । त्यसै गरि दैनिककीय उपभोग गरि राखेको खाद्यान्न, तथा पसलबाट किनिने सामानको मूल्य सूचि, पसल दर्ता लगायतको काममा एउटै बजार मूल्यको निर्धारण गरि मासिक रुपमा नै अनुगमन गरि दिए हुन्थ्यो । किनभने सर्वसाधारण नागरिक महंगीको मूल्यमा पिरोली राखेको अवस्था छ ।
खाबाङमा घर छाउने ढुङ्गाको खानी पनि छ कस्तो छ आज भोली अवस्था ?
हो छ, विगत ६ दशक पुर्खा देखि नै घर छाउने ढुङ्गा निकाली राखेका नै थियौँ । तर अहिले २ वर्ष भयो बन्द गरेको । पहिरो जाने सम्भावना, व्यक्तिको खेतबारी विनास हुने र छाउने ढुङ्गालाई प्रशोधन गर्दा आधुनिक सामाग्री नहुँदाको कारण अहिले बन्द गरेका छौँ । तर यी समस्यालाई समाधान गर्नेमा हामी सल्लाह गरिराखेका छौँ । ढुङ्गाको माग भैराखेको छ र हामी पनि सञ्चालन गर्नमा सल्लाह गरिराखेका छौँ । अब छिटै सञ्चालनमा लिन्छौँ ।
कसरी बिक्री गर्नु हुन्थ्यो, कहाँ कहाँबाट लिन आउने गर्दथ्ये ?
एउटा घरको लागि १ लाख ५० हजार देखि २ लाख रकम सम्ममा हामी तयार गरिदिन्थ्यो । त्यो मान्छेले नफुटाइ पछि त जुगैजुग सम्ममा धान्ने गर्दछ । अत्यतै उपयोगी हुन्छ नयाँ घर बनानु परे पनि सोही ढुङ्गाले नै नयाँ घरलाई छाउन सकिन्छ । रोल्पाको थबाङ, भूमेको वडाहरु ८ र ९ बाहेकका सबै वडाले यसै ठाउँबाट नै लिने गरेका थिए ।
कुराकानीको अन्त्यमा केहि भन्नु छ ?
समाजको काममा नै योगदान गरि राखेको छु । आफुले सके सम्ममा आगामी दिनमा पनि जनअपेक्षा अनुसार नै काम गर्ने छु । खाबाङबासीको विचार तथा अनुभुती राख्ने अवसर दिनु भो, आहा सञ्चार साप्ताहिक पत्रिका र आहा सञ्चार डटकम अनलाईनलाई परिवारलाई पनि धन्यबाद दिन्छु । धन्यबाद !
Previous articleओझेलमा मुसिकोटको ठुलीदह (भिडियो सहित)
Next articleविद्यालय अनुगमन : कार्यान्वयको आधारमा प्रोत्साहन
शैक्षिक सहयोगका लागि चिनियाँ संस्थासँग सम्झौता
१० आहा मुक्तक : जिएम दिपु देपेन्द्र
ह्याँती गर्ने कुरा : ह्वाँङ्ङै
भुकम्प सुरक्षा दिवसको अवसरमा र्याली र कोणसभा
aahasanchar - January 16, 2018
रुकुमका बिद्यार्थीले निकाले लाठी जुलुस
aahasanchar - January 22, 2018
मुसिकोटमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अन्तरक्रिया
aahasanchar - March 29, 2019
म पढेर सबैभन्दा पहिले असल नागरिक बन्न चाहान्छु
aahasanchar - December 5, 2018
स्वास्थ्य / मनोरञ्जन77